किन महिला पूजाहारीहरूको हुन सक्दैन? – 2माछा
घर / चर्च / मुद्दाहरु / किन महिला पूजाहारीहरूको हुन सक्दैन?
महिला ordination मा चर्च गरेको प्रतिबन्ध छ छैन विवेक को एक मामला, तर पूजाहारीको व्यक्तिको पेशा एक affirmation मौलिक छ कि बाबुको. "हुनत लागि तपाईं ख्रीष्टमा असंख्य गाइड छ, तपाईं धेरै बुबाहरू छैन,"प्रेरित पावलले यस्तो लेखे. "मैले सुसमाचार मार्फत ख्रीष्ट येशूमा आफ्नो बुबा भयो" (पावलको हेर्न कोरिन्थीहरूलाई पहिलो पत्र 4:15 र न्यायकर्ता को बुक 18:19). महिला चर्च मा धेरै नेतृत्व भूमिकाको भर्न, यस्तो धार्मिक आदेश र apostolates को टाउको रूपमा, स्कूल principals, र धार्मिक शिक्षा निर्देशक. एक पुजारी, तर, केवल एक आध्यात्मिक नेता हुन भनिन्छ छैन, तर एक आध्यात्मिक बुबा; र गर्दा एक महिला वस्तुतः जो त्यो हुन इच्छा हुन निःशुल्क छ, त्यो हुन सक्दैन एक कुरा बुबा छ.
मण्डली पुरुष र महिला मर्यादा मा बराबर हो कि राख्छ, दुवै परमेश्वरको छवि र स्वरूपमा मा गरिएको होने (देख्नुभएको उत्पत्तिको पुस्तक 1:27). जबकि तिनीहरू बराबर छन्, तर, पुरुष र महिला समान तर फरक छैनन्; र तिनीहरूले मौलिक अलग vocations पूरा गर्न भनिन्छ: पिता र मातृत्व, क्रमशः. न त व्यक्तिको पेशा अन्य उच्च छ, तर, फेरि, मर्यादा मा बराबर. पोपको पावलले XI लेखे, "को लागि मानिस टाउको छ भने [परिवारको], महिला हृदय, र उहाँले शासन मा मुख्य स्थान ओगटेको रूपमा, त्यसैले त्यो सक्छन् र को लागि आफु प्रेममा मुख्य स्थान दावी गर्नुपर्छ " (क्याथोलिक चर्च 27). को analogy जारी राख्न, न टाउको न त दिल शरीर थप आवश्यक छ; शरीर दुवै बाँच्न आवश्यक. मण्डली गरेको मोडेल, त्यसपछि, सद्भाव मध्ये एक छ, यो complementarity को sexes को. यसको विपरीत, यस सांसारिक संसार, अर्थ समानता mistaking गर्न interchangeability, को sexes को युद्धमा स्थापित छ, जसमा पुरुष र महिला प्रतिद्वन्द्वी को स्तर कम छन्.
मर्यादा को प्रश्न मा, संसारको इतिहासमा कुनै संस्थाले क्याथोलिक चर्च भन्दा एक बराबर वा ठूलो डिग्री गर्न महिला उच्च छ. यस सुसमाचारका को पुरुष लेखकहरू, उदाहरण को रुपमा, पुनरुत्थानको गर्न पहिलो साक्षी बदल वा तथ्यलाई ढाकछोप गर्न प्रयास गरेनन्, विश्वास को मूलभूत सत्य, थिए महिलाहरु. यो दिन को सामाजिक मान्यता विरुद्ध गए, रूपमा सामान्यतया एक महिलाको शब्द प्राचीन प्यालेस्टाइनमा सानो लायक दिइएको थियो (देख्न लूका 24:11). मण्डली गरेको परम्परा पवित्र महिलाहरु को litany साँच्चै लामो र प्रभावशाली छ, मण्डली तीन घोषणा गरिएको छ जो डाक्टर सहित, विश्वास को विशेष शिक्षकहरू: सिएना को सन्तहरू क्याथरीन (घ. 1380), को नाम लेख्नुहोस Ávila को टेरेसा (घ. 1582), र Lisieux को Thérèse (घ. 1897).
सबै महान संन्यासी चर्च सम्मान को, यो अनमोल भर्जिन मरियम टाढा र बाँकी माथि revered छ. वास्तबमा, पोप जन पावलले महान् तर्क, मरियमलाई "प्राप्त न प्रेरितहरूको न त स्पष्ट सेवकाई पुजारीको गर्न उचित मिशन गर्ने चर्च गरेको अनुपम भक्ति पूजाहारीको ordination गर्न महिला गैर-भर्ना मतलब छैन महिलाहरु कम मर्यादा को हो गर्न सक्ने देखाउँछ, न त यो तिनीहरूलाई विरुद्ध भेदभाव रूपमा construed गर्न सकिन्छ " (पूजाहारीको ordination 3).
मा दोस्रो भेटिकन परिषद को नजिक भएकोले 1965, मण्डली निरन्तर सहेका छ र पश्चिमी समाज बाट वृद्धि दबाव महिला ordination मा उनको रुख उल्टाउन. अहिलेसम्म यो मण्डली गरेको एक परिभाषित शिक्षण छ साधारण magisterium, सुरुदेखि यसलाई unanimously विश्वासी द्वारा विश्वास गरिएको छ जसको अर्थ. चर्च, त्यसैले, यसलाई परिवर्तन गर्न शक्तिहीन छ. यो बिन्दु Underscoring, जन पावलले घोषणा, "क्रममा सबै शङ्का ठूलो महत्व एक कुरा सन्दर्भमा हटाउन सकिन्छ, मण्डली गरेको ईश्वरीय संविधान नै सम्बन्धित छ जो एक कुरा, को भाइहरू पुष्टि मेरो सेवकाईको सद्गुण मा (CF. लूका 22:32), म चर्च महिलाहरु मा पूजाहारीको ordination दिनु गर्न पाठका कुनै अधिकार छ भनी घोषणा र यस न्याय पक्के द्वारा आयोजित गर्न छ सबै चर्च विश्वासी " (पूजाहारीको ordination 4).
केही मानिसहरू छान्ने उहाँको चर्च येशूको पहिलो पूजाहारीहरू केवल सांस्कृतिक स्तर अनुकूल थियो रूपमा सेवा गर्न भनेर तर्क. रूपमा सुसमाचारका स्पष्ट देखाउन, तर, नियमित येशूले परमेश्वरको राज्यको खातिर सामाजिक मान्यता पनि disregarded (देख्न मत्ती 9:11 र यूहन्ना 8:3). यसबाहेक, priestesses, ग्रीस र रोम को मूर्तिपूजक धर्म गर्न साधारण हुनुको, पुरातन समाज को एक स्वीकार पक्ष थिए.
मानिसहरू गर्न पुजारीको को आरक्षण सीधा प्रभुको उदाहरण र पवित्र धर्मशास्त्रको शिक्षा निम्नानुसार; यसलाई "चर्च को स्थिर र सार्वभौमिक परंपरा द्वारा संरक्षित गरिएको छ र द्वारा दृढ सिकाउनुभयो Magisterium यसको थप हालको कागजातहरू "मा (पूजाहारीको ordination 4). "को सन्तहरू सबै चर्चमा रूपमा,"सेन्ट पल लेखे, "महिला चर्चमा मौन राख्नुपर्छ. तिनीहरूले बोल्न अनुमति छैन, तर अधीनस्थ हुनुपर्छ, पनि व्यवस्था भनेअनुसार. ... एक महिला चर्च बोल्न लागि लागि यो लज्जास्पद छ " (कोरिन्थीहरूलाई पहिलो पत्र 14:33-34, 35; यो पनि हेर्नुहोस तिमोथीलाई पहिलो पत्र 2:12). प्रेरित, को पाठ्यक्रम, साधारण अर्थमा "चर्च बोल्ने" बाट महिला निषेध मतलब थिएन, तर प्रचार वा विधानसभा भन्दा अध्यक्ष को अर्थमा. मूल feminism को दृष्टिकोणबाट बाइबल व्याख्या गर्ने ती पावलका केवल उहाँले बाँचिरहेको पुरुष-प्रभुत्व संस्कृति झल्काउने जिद्दी छ, र यसरी आज पाठकहरूलाई लागि कुनै सान्दर्भिकता छ. दृश्य यस बिन्दु, हुनत, जो प्रश्न मा Sacred धर्मशास्त्रको प्रेरणा कल गर्न सुरु, व्यक्तिहरूलाई रूपमा अप्रासंगिक व्यावहारिक कुनै पनि तिनीहरूले व्यक्तिगत आपत्तिजनक फेला जो बाइबल को पद खारेज गर्न लागि ढोका खुल्छ. यसलाई सधैं यी अवस्थामा सर्वश्रेष्ठ फिर्ता मा चर्च को स्थिर निर्देशन र शिक्षा गिर छ किन यो छ.
प्रारम्भिक मसीही ऐतिहासिक लेखोटहरू देखाउन महिलाहरु विधवाहरूलाई को आदेश मार्फत consecrated धार्मिक जीवनमा भाग कि (मूलतः पहिलो नन). रोम को सेन्ट Hippolytus, A.D बारेमा मा लिख. 215, यो क्रममा भर्ना महिला थिए उल्लेख "नियुक्त हुँदैन ... . Ordination किनभने Liturgy को पादरी लागि हो; तर एक विधवा प्रार्थना लागि नियुक्त गरिएको छ, र प्रार्थना सबै को कर्तव्य हो " (प्रेषितहरूको जस्तै परंपरा 11).
प्रारम्भिक चर्च मा एक समय को लागि त्यहाँ Deaconesses एक आदेश पनि थियो. को deaconesses, तर, या त ordination प्राप्त गर्नुभयो, तर laity सदस्यहरू मानिन्छ थिए. deaconesses उल्लेख, उदाहरण को रुपमा, मा Nicaea को परिषद 325 स्पष्ट, "हामी यस्तो बानी लिया छ रूपमा deaconesses द्वारा मतलब, तर जो, तिनीहरूले हात को कुनै कर छ देखि [ordination जस्तै], संख्यात्मक गर्न छन् मात्र laity बीच " (Canon 19). त्यसै गरी, सेन्ट Epiphanius वरिपरि बताए 375 कि Deaconesses को आदेश लागि उद्देश्य priestess भएकोमा थिएन ", न त प्रशासन को काम को कुनै पनि प्रकारको लागि, तर महिला को मर्यादा खातिर, या त बप्तिस्मा को समयमा, वा बिरामी केलाउँदा वा पीडित को, भनेर [महिला] शरीर मानिसहरू पवित्र रीतिथितिहरू प्रशासन द्वारा देखेको हुन सक्छ, तर deaconess द्वारा " (Panárion 79:3).